IP010 - OMG ISPY - 3G IP Cam - Tohano karatra sim 3G sy Wifi - Vahaolana OMG
iSpy - Famaritana fakantsary IP fiarovana
Ny fiambenana ny tranonao dia tsotra, na dia kilometatra an'arivony maro aza. Ampifandraiso fotsiny ny fakan-tsarimihetsika fiarovana Wi-Fi 3G Wi-Fi (iSpy) ary avelao handeha. Azonao atao ny manamarina amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny finday smartphone hanaraha-maso ny tranonao ary azonao atao ny miala sasatra amin'ny fahalalana fa raha misy miditra ao dia hampandrenesina avy hatrany ianao amin'ny fisamborana ireo mpiditra an-tsokosoko nalefa tany amin'ny findainao. Amin'ny fiadanan-tsaina dia azonao atao ny manamarina ny zava-mitranga ao an-trano amin'ny alàlan'ny streaming video live 720P. Na dia tapaka aza ny herinaratra, ny batterie anatiny dia vonona hatramin'ny fampiasana 4 ora hahitanao ny fihetsiketsehana tsy mihetsika / ampiasain'ny sensor PIR
Fiomanana haingana sy mora
Dingana 3 hampiasana ny fakan-tsary. Sintomy ny APP → Misoratra anarana amin'ny mailakao ary miditra → Kitiho ny fakantsary ary ampio amin'ny APP.
Tsy misy rafitra fiarovana router sy complexes ilaina. Ny fametrahana ny fakan-tserasera dia mety hitazona ny fakan-tsary eo amin'ny tontolon'ny fisakafoana na hiankin-doha amin'ny metaly rehetra.
3G & Wifi azo alaina
Mifanaraka amin'ny haitao 3G sy Wi-Fi farany, azonao atao ny miditra amin'ny stream video mivantana na horonantsary noraiketina na aiza na aiza, amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS sy Android finday maimaim-poana.
Fitaovana magnetika, iSpy dia azo ahodina sy ahitsy amin'ny zoro rehetra.
Azonao atao ny miresaka amin'ny olona amin'ny mpandahateny sy ny mikrô.
Hery / Motion detection
Raiso ny fampandrenesana rehefa voamarina ny tabataba na ny fihetsiketsehana.
fakan-tsarimihetsika fakan-tsarimihetsika iSpy CCTV Sim Araho ny mahazatra, mitandrema amin'ny tsy mahazatra
Raha misy miditra ny tranonao dia hampandrenesinao avy hatrany ny findainao.
Apetraho amin'ny telefaoninao ny tranonao, andro aman'alina
Ny zava-mitranga dia eo ambany fanaraha-maso na amin'ny alina.
Ampio fakan-tsary an-tambajotra 3G / Wi-Fi ho an'ny fanaraha-maso lavitra
Maro no manara-maso ny fitantanana miaraka amin'ny rindrambaiko iray
Amin'ny fampiharana iray, afaka mijery mpitandro filaminana an-trano maro ianao. Mianteha betsaka araka izay tianao, na aiza na aiza tianao, Mijanona miaraka amin'ireo olon-tianao
Jereo amin'ny finday / pad / Browser
Natao tamin'ny Batemy
Ny bateria natsangana dia vonona ho an'ny ora 4 ora na dia tapaka ny herinaratra.
Fohy nefa manankarena amin'ny Features
Santionany App Mobile View (Support Android & IOS)
5236 Total Views 1 Views Today